बिष्णु पौडेलले गुरुले बालुवाटार को जग्गा फिर्ता गर्छु भन्दा चेलोले ७० करोड म पनि फिर्ता गर्छु भन्नु पर्दैन ? – Khabar Patrika Np
बिष्णु पौडेलले गुरुले बालुवाटार को जग्गा फिर्ता गर्छु भन्दा चेलोले ७० करोड म पनि फिर्ता गर्छु भन्नु पर्दैन ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत्र २५, २०७७ समय: २३:५०:४३
यता राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र अर्का नेता भीम रावललाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरि ६ महिनासम्म निलम्बन गरेको घट्नालाई प्रतिक्रियामात्रै भएको बताएका छन्
आज राति प्राइम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले केन्द्रबाट कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरेको र उनको यो कदम सफलतातर्फउन्मुख रहेको टिप्पणी गरे ।
विश्लेषक खनालले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराईबीच पनि एकता हुने सनसनीपूर्ण खुलासा गरे । उनले एमाले पनि फुट्ने नै जिकिर गरे । उनले अब एमालेभित्र माधव नेपाल समूहको भविष्यको कुरा गर्दा राजनीतिक कार्यदिशा बनाउन सक्दा त्यति खराब नहुने पनि दाबी गरे।